၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ( ၂၈ ) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်သည် နော်ဝေ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Dag-Inge Ulstein အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့၊ ၁၁:၀၀ နာရီအချိန်တွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၇)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နော်ဝေနိုင်ငံနှင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန တို့အကြား ရေအားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကဏ္ဍတို့တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ​နော်ဝေနိုင်ငံ၊ Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)နှင့် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန တို့အကြား Technical Assistant Program (Phase-I) ကို ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အဆိုပါ Phase(I)တွင် Hydropower Development ၊ Technical Transfer ၊ Implementation Support to Electricity Law and Regulations ၊ Hydropower Standards ၊ Strengthening of hydrological network and database for hydropower development နှင့် NVE Administration and Technical Support ဟူသော ဧရိယာ (၆)ခုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အခြေအနေများ၊ သူဌေးနှင့် အထက်ကျိုင်းတောင်းစီမံကိန်းများအတွက် In-house Consultant ခေါ်ယူပေးခြင်းနှင့် Construction Management အတွက် Consultant စီစဉ်ပေးခြင်း၊ နော်ဝေနိုင်ငံ (သို့) အခြား သင့်လျော်သည့် နိုင်ငံများရှိ တက္ကသိုလ်များသို့ ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့သင်တန်းများ တက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း၊ Hydrological Database ထူထောင်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည့်အခြေအနေများ၊ အဆိုပါ Technical Assistant Program (2019-2022) Phase (II) ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် (၈၅,၉၀၅,၀၀၀) နော်ဝေခရိုနာ လျာထားမှု အခြေအနေများနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး နော်ဝေအစိုးရထံမှ ရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားမှု အတည်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည့် အခြေအနေများ၊ Electricity Master Plan ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးဆိုင်ရာ Short ၊ Medium ၊ Long Term Plan များနှင့် Smart Metering System ဆိုင်ရာတို့အား အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းနိုင်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဦးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။